सक्दिन म निर्घिनी बन्न | Nepal Flash
माघ ०५, २०७७, सोमबार
सक्दिन म निर्घिनी बन्न
हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि राष्ट्रिय एकता दिवस आयो, गयो । केही मन रमाए, केही नाक खुम्चिए ।
मन हुने, देशको माया हुनेले कुनै न कुनै तरिकाले पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्झिए । यो सुन्दर मुलुकको एकिकरणको जग बसाली दिएका पृथ्वी नारायणलाई धन्यवाद पनि दिए । मैले पनि दिएँ । नेपाली हुन पाएकोमा गौरव गरे । मैले पनि एक पटक आँखा चिम्लिएर उनलाई सम्झिएँ । धन्यवाद दिएँ, नेपाली भएर जन्मन पाउँदा । नेपाली नै बनेर बाँच्न पाउँदा ।
जसले यो धर्तीमा टेक्ने आधार तयार पारि दिए । जसले यो मुलुकको माटोमा स्वतन्त्रताको सुगन्ध भरि दिए । अनि जसले नेपाली भएर जन्मिने र मर्ने अधिकार दिए । त्यही महान् व्यक्तित्वलाई गाली गर्ने पनि यो मुलुकमा कम छैनन् । अहिले त यो मुलुकका सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका र भोलि पनि त्यही सत्तामा काबिज हुने सपना पालिरहेकाहरू नै पृथ्वी नारायण शाहलाई अछुतो मान्न थालेका छन् । दुख लाग्छ, पुर्खाका योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेहरू देख्दा ।
हामी कति कृतघ्न रहेछौँ । जसका कारण राष्ट्रवादका नाममा राजनीति गर्न पाइरहेका छौँ । उसको जन्म जयन्तीमा एक दिन राष्ट्रिय पर्व मनाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने ।
कहिले काहीँ लाग्छ । यही मुलुकमा बसेर राजनीति गर्ने । यही मुलुकको नाम बेचेर सत्तामा काबिज हुने । यही मुलुकका जनतामाथि राज गर्ने । अनियमितता गरेर अर्बौँ कमाउने । यही देशमा रजाइँ गर्न कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने नेताहरूलाई किन लाज लाग्दैन होला, पृथ्वी नारायण शाहलाई गाली गर्न ? आखिर उनले एकताको सपना नदेखेका भए, के गरी खान्थे, हाम्रा नेताहरू । राष्ट्रिय एकताको प्रतीकलाई सराप्दा किन महसुस गर्दैनौ तिमी यो धर्तीको सुगन्ध ? किन सोच्दैनन् होला ? किन मन पनि दुख्दैन होला ? जुन देशको नाम बेचेर राजनीति गरिरहेका छौ, त्यसैको निर्माणकर्तालाई गाली गर्दा एक पटक मुटु चसक्क दुख्नु पर्ने होइन र ? छ्या ! कति निर्घिनी बनेछौँ, तिमी ।
कति कृतघ्न रहेछौँ । जसका कारण राष्ट्रवादका नाममा राजनीति गर्न पाइरहेका छौँ । उसको जन्म जयन्तीमा एक दिन राष्ट्रिय पर्व मनाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने । तर, सर्वसाधारणले उनको योगदान बिर्सी सकेका छैनन् कि जस्तो पनि लाग्छ । पृथ्वी जयन्तीको दिन यो बस्तीका सडकमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर निस्कनेहरू देख्दा एक पटक गर्वले छाती चौडा भयो । लाग्यो, पृथ्वी नारायणलाई बिर्सी सकेका कतिपयले फेरि उनलाई सम्झन थालेका छन् । अनि दुख पनि लाग्यो । हामीले गर्व गर्नु पर्ने नेपाल आमाका सपुतको सालिकमा फूल गुच्छा चढाउँदा समेत राज्यले धक्का मुक्की गर्दा । शायद पृथ्वी नारायणले सक्थे भने हामीमाथि राज गर्नेहरूको मुख्यालय रहेको सिंहदरबार बाहिर ठडिएको सालिकबाटै दुई थोपा आँसु अवश्य झार्थे ।
जसले इतिहासका नायकको भूमिकालाई गौण ठान्छ । उसले जन्म लिएको धर्तीप्रति नै गद्दारी गरिरहेको हुन्छ भन्न मलाई अप्ठेरो लाग्दैन । जसले आफू उभिएको धरातललाई बिर्सन्छ, त्यो व्यक्तिलाई कसैले सम्मान गर्न सक्दैन । हिजोआज निकै भेटिन्छन्, त्यस्ता गद्दार यो भूमिमा । इतिहासको अपमान गर्ने । विश्व मै सबैभन्दा पाको इतिहास भएको राष्ट्र मध्ये एकका रूपमा हामीले आफैँमाथि गर्व गर्ने गरेका छौँ । तर, केही गद्दारहरू इतिहासका हरफहरूलाई मेट्न तँछाड मछाड गरिरहेको छन् । मनदेखि भन्ने हो भने त्यस्ता त जन्मभूमिबाटै श्रापित हुनेछन् । अनि इतिहासलाई कलङ्कित पार्न खोज्नेहरूको इतिहास पनि कालै लेखिने छ । कसैले बनाउने छैन, तिनीहरुका सालिक यो धर्तीमा ।
यो हाम्रा पुर्खाहरूको सपनाको देन हो । जसले पुर्खाको सपनालाई भेद्न खोज्छ, त्यस्तो जन्मलाई धिक्कार्न बाहेक केही गर्न सकिँदैन ।
कसैले इतिहास मेटाउने कोसिस गर्छ भने त्यसले सबैभन्दा पहिले आफैँ बसेको कोखमा छुरा रोप्ने साहस गर्नु पर्छ । आफू जन्मिएको माटोलाई धिक्कार्ने साहस गर्नु पर्छ । अनि बाँचेको आकाशतिर थुक्ने साहस गर्नु पर्छ । नत्र स्विकार्नु सक्नु पर्छ, यो देश हामीलाई हाम्रा पुर्खाको बलिदानबाट हासिल भएको हो । उनीहरूले सपना नदेखेका भए आज न यो नेपाल बन्ने थियो, नत हामी नेपाली नै । यो हाम्रा पुर्खाहरूको सपनाको देन हो । जसले पुर्खाको सपनालाई भेद्न खोज्छ, त्यस्तो जन्मलाई धिक्कार्न बाहेक केही गर्न सकिँदैन । जसले आमा र मातृभूमिका नायकको अपमान गर्छ, त्योभन्दा महापाप अरु केही हुनै सक्दैन ।
अहिले यो मुलुकका मठाधिसहरु अरूले निर्माण गरी दिएको घरको धुरीमा बसेर, त्यही घरको जग भत्काउने आदेश दिँदै छन् । उनीहरूले थाहा पाउनु पर्छ, जब त्यो घर भत्किने छ । त्यसको भग्नावेसमा पुरिने पहिलो व्यक्ति त्यही धुरीमा बस्ने नै बन्नेछ भनेर । दुई दिनको सत्ता लिप्सामा र कुनै वर्ग वा समुदायको खुसीका लागि मात्र इतिहासलाई मेट्न पाइँदैन । पुर्खाको देनलाई अस्वीकार गर्न पाइँदैन ।
संसारमा सामाजिक र राजनीतिक क्रमभङ्ग भई रहेका हुन्छन् । तर, हरेक परिवर्तनसँगै पुरानो डोब मेटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता कहीँ कतै छैन । हामी भने आफूलाई अग्रगामी देखाउन इतिहासका सुनाैला अध्याय नै मेटाउन तल्लीन छौँ । वाह ! हामी ।
हिजो जुन राष्ट्रिय नायकका सन्ततिका सामु जी–हजुरी बिसाएर नथाक्नेहरू आज उनीहरूको छायासँग पनि तर्किन थालेका छन् । कति स्वार्थी बनी सकेका रहेछौ, तिमी । हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई समेत अस्वीकार गर्ने । राष्ट्र एकीकरणको जग बसाल्ने नायकलाई राजनीतिक वादसँग जोडेर हेर्ने ।
इतिहास भनेको त कुनै पनि राष्ट्रको जग हो । वर्तमानलाई चलायमान बनाउने आधार हो । भविष्य निर्धारण गर्ने माध्यम हो । हाम्रो स्वाभिमानको प्रतीक हो । अनि राष्ट्रलाई एक ढिक्कामा बाँध्ने कडी पनि । आफ्नै मुलुकको इतिहासप्रति जसलाई लाज लाग्छ, त्यसले यो मुलुकलाई आफ्नो भन्ने अधिकार पनि त्याग्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । नत्र कुनै दिन तिम्रो सपनामा आएर ती नायकहरूले प्रश्न गर्ने छन् । ‘हामीले रगत पसिना बगाएर एक बनाएको राष्ट्रमा हामीलाई नै सरापेर कस्तो स्वार्थ सिद्ध गरी रहेका छौ ? अनि किन बाँड्दै छौँ, हामीले एकताका सूत्रमा बाँधेका जनतालाई जात र वर्गको नाममा ? भो’ अति भयो, तिम्रो यो स्वार्थी राजनीति ।’
मलाई त मेरो धर्तीको माटोको सुगन्ध नै प्यारो छ । मेरा पुर्खाको बलिदानप्रति गर्व छ । मेरै धर्म प्यारो छ । त्यसैले मलाई मेरो इतिहासमाथि घमन्ड छ । म जस्तो सुकै स्वार्थका लागि पनि सपुतलाई कपुतको दर्जामा राख्न सक्दिन । उनीहरूको योगदानलाई नकार्न सक्दिन । किनकि म सक्दिन तिमी झैँ निर्घिनी बन्न ।
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आज पनि दुई खेल हुँदै
बायर्नकाे जितमा लेवान्डोस्कीको कीर्तिमानी गोल
यी हुन् मुख्यमन्त्री राईकी हुनेवाली बेहुली (तस्बिरसहित)
जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, सातजना घाइते
काँडाघारीमा दुई वर्षीया बालिका बलात्कृत, १४ वर्षीय किशोर पक्राउ
#नेकपा #कोरोना #मृत्यु #पक्राउ #नेप्से #नेपाली कांग्रेस #जल तथा माैसम #डोनाल्ड ट्रम्प
लाग्न थालेको छ, खै किन स्विकारेँ परिवर्तनहरू?
प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रणालीगत असफलता
पुस ०६, २०७७